जेष्ठ नागरिक समाजमा रहेका ९५ जना बृद्धबृद्धाहरुको निःशुल्क स्वास्थ चेक जाँच -
जेष्ठ नागरिक समाजमा रहेका ९५ जना बृद्धबृद्धाहरुको निःशुल्क स्वास्थ चेक जाँच
नेपालगन्ज, लायन्स क्लबर भोमी अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा काभ्रेको पनौति नगरपालिका वार्ड नं. १० खोपासी स्थित रहेको साहारा जेष्ठ नागरिक समाजमा रहेका ९५ जना बृद्धबृद्धाहरुको निःशुल्क स्वास्थ चेकजाँच गरिएको छ ।
बि.सं. २०७० सालामा स्थापना भएको उक्त संस्थामा ६० वर्ष भन्दा माथिका बृद्धबृद्धाहरु रहेका छन् । उक्त समाजमा रहेका बृद्धबृद्धाहरुको जनरल चेकअप, सुगर जाँच, फिजियोथेरापी परामर्श, ब्लड प्रेसर, पिसाब जाँच र निःशुल्क इसीजिको चेक जाँच गरिएको छ । लायन्स क्लब काठमाण्डौं र भोमी अस्पतालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ९५ जनाको स्वास्थ्य चेकजाँच गरिएको छ ।
दैनिक रुपमा भजन किर्तन गरेर मनोरञ्जनात्क कार्य गर्ने गरिएको साहारा जेष्ठ नागरिक समाजका महासचिव भुषणकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । साथै जन्मदिन र बैवाहिक जीवनमा बाँधिएको अवसरमा पनि त्यहाँ कार्यक्रम मनाउने गरिएको बताएका छन् ।
भोमी अस्पतालका म्यानेजर राजेश कुमार शाहीका अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्न पाउँदा खुशी लागेको र आगामी दिनहरुमा यस्ता कार्यक्रममा सहयोग गरिने बताएका छन्््््् । यसरी सो शिविरमा भोमी साहारा कार्ड बितरण गरिएको बताएका छन ।
भोमी साहारा कार्डमा निःशुल्क एम्बुलेन्स, निःशुल्क चेकअप, निःशुल्क परामर्श र अन्य सेवामा विशेष छुट दिने अस्पतालले जनाएको छ ।
Previous articleखुर्कोट महोत्सवमा आज –यापर मिस्टर डि को धमका
Next articleखजुराको एफगाउँमा विदेशमा सिकेको ज्ञानले घरमै रोजगारी